Ahoana ny fomba fiasan'ny multitasking iPad ao amin'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS 9, iPad Air
Ny iOS 9 dia eo akaiky eo ihany, ary raha misy fitaovana izay hitondra vaovao manandanja dia tsy misy isalasalana fa ny iPad. Fijery misaraka, Slide Over ary sary amin'ny sary Ireo dia fiasa izay tsy maintsy ataontsika mba hanombohana ity fararano ity. Inona avy ny tsirairay amin'izy ireo? Ahoana ny fomba fiasa? Inona avy ireo fitaovana hotohanana? Izahay dia manome anao ny antsipiriany rehetra etsy ambany.
1 Slide Over, rindranasa roa eo amin'ny efijery fa iray ihany no miasa
2 Split View, rindranasa roa mandeha amin'ny ora iray ihany amin'ny efijery
3 PiP na sary amin'ny sary
4 Multitasking nalaina tamin'ny ambaratonga hafa
Slide Over, rindranasa roa eo amin'ny efijery fa iray ihany no miasa
Slide Over dia safidy vaovao hanadiavana fampiharana nefa tsy mila manidy ilay ampiasainao hatrizay. Alao an-tsaina hoe mizaha amin'ny Safari ianao ary te-hijery ny Twitter. Raha tokony hanidy Safari sy hanokatra Twitter, ny ataonao dia manosika ny rantsan-tànanao avy eo amin'ny sisiny ankavanan'ny efijery mankany ankavia, ary hisokatra tsanganana vaovao. Raha efa nampiasa Slide Over ianao teo aloha dia hisokatra mivantana miaraka amin'ilay rindranasa nampiasanao. Raha tsy izany dia hiseho ireo sary masina miaraka amin'ireo rindranasa mifanaraka amin'ny Slide Over ary tsy maintsy misafidy ilay tianao hosokafana ianao (Twitter raha ny momba anay).
Ao amin'ny Slide Over, ny rindranasa nosokafanao ary hita eo ankavanana izy, eo amin'ny tsanganana kely, dia ny fampiharana faharoa, saingy io no tena mandeha, satria ilay voalohany, ilay nosokafanao taloha, dia ho mangatsiaka nefa tsy afaka mifanerasera aminy. Raha te hiverina amin'ny rindranasa voalohany ianao dia mila tsindrio fotsiny ary hameno ny efijery iray manontolo indray izy ity. Raha te hanova ny rindranasa faharoa ho an'ny iray hafa ianao dia azonao atao amin'ny alàlan'ny fisintahana avy eo amin'ny sisiny ambony mankany ambany, hiseho indray ireo kisary amin'ireo rindranasa mifanaraka aminao mba hahafahanao misafidy ilay tianao hosokafana,
Satria ny loharano takiana amin'ity asa ity dia tsy dia avo loatra, dia hifanaraka amin'ny iPad Air 1 sy 2, ary iPad Mini 2 sy 3. Ho an'ity dia tsy maintsy apetrakao ny iOS 9 ary tsy maintsy hanavao ny rindranasan'izy ireo ny mpandrindra mba hifanaraka amin'ity asa vaovao ity. Ny fampiharana iOS Native dia hampiditra azy hatramin'ny voalohany.
Split View, rindranasa roa mandeha amin'ny ora iray ihany amin'ny efijery
Ny multitasking amin'ny efijery marina dia tonga amin'ny iPad ihany. Azonao atao ny manana fisoratana anarana roa misokatra eo amin'ny efijery ary mifandray amin'izy roa hiasa amin'ny ara-dalàna tanteraka izany. Raha hampiasa Split View dia tsy maintsy manomboka amin'ny Slide Over isika. Raha vantany vao manana ny fampiharana faharoa eo amin'ny efijery isika dia tsy maintsy manosika ny sisiny havia mankany afovoan'ny efijery, avy eo dia hofaritana tsipika matevina kokoa io sisin-tany io ary handeha ho any amin'ny maody Split View ireo rindranasa roa ireo.
Tsy ilaina ny mitazona ny efijery amin'ny faritra mitovy (50-50), fa ny refy hafa kosa dia azo ampiasaina hanamboarana ny toetran'ny fampiharana tsirairay. Azonao atao ny mandeha amin'ny tahan'ny 70-30 amin'ny maodely mangoraka ankoatry ny 50-50. Ny maody fakantsary dia tsy manome afa-tsy safidy 60-40. Raha te hiverina amin'ny efijery feno ianao dia mila soloina fotsiny ilay sisin-tany izay manasaraka ny rindranasa roa ankavia na miankavanana, arakaraka ilay rindranasa tianao ajanona eo amin'ny efijery.
Ity maody Split View ity dia mitaky be loatra amin'ny resaka loharano, koa tsy mifanaraka amin'ny iPad Air 2 fotsinyAmin'izao fotoana izao no hany fitaovana iOS misy RAM 2GB. Heverina fa ny iPad manaraka havoaka dia hanohana an'io endri-javatra io ihany koa, ary iza no mahalala raha hanana izany ny iPhones indray andro any.
PiP na sary amin'ny sary
Ny farany amin'ireo safidin'ny iOS 9 dia mety ho fantatry ny maro kokoa, satria zavatra efa ela izy io tao amin'ny fahitalavitra: PiP, Sary an-tsary na sary an-tsary. miaraka amin'ity safidy ity rehefa milalao horonantsary ianao raha tsindrio ny bokotra fanombohana dia tsy hikatona ilay horonantsary, saingy hihena ny habeny, hidina amin'ny zoro ambany ambany izy io ary afaka manokatra rindranasa hafa ianao nefa tsy mijanona mahita azy intsony. Toy izany koa no hitranga raha mijery horonan-tsary ianao dia manery fampandrenesana ary manova ny fampiharana.
Mihetsika ity varavarankely kely ity ary azo ovaina ny habeny. Azonao atao koa ny mizara azy amin'ny sisin'ny efijery ka zara raha hita ny sisiny, ary afaka manohy mihaino ilay horonan-tsary ianao nefa tsy rototra hanatrika ny zavatra tokony hataonao. Avy eo ianao dia afaka misintona azy hiverina amin'ny efijery ary manohy mijery azy.
PiP dia hifanaraka amin'ny rindranasa rehetra izay mifanaraka amin'ity asa vaovao ity sy mila iPad Air 1 sy 2, na iPad Mini 2 sy 3.
Multitasking nalaina tamin'ny ambaratonga hafa
Ary farany, ny efijery iPad dia ampiasaina araka ny tokony ho izy miaraka amina multitasking options izay mamela anao hampiasa fampiharana tsy mitovy amin'ny efijery feno nentin-drazana. Ary mbola mila mahafantatra ny iPad Pro isika, izay afaka mitondra vaovao bebe kokoa amin'ity lafiny ity. Amin'ny 9 septambra dia hamela fisalasalana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Ny fomba fiasan'ny iPad multitasking amin'ny iOS 9
Final Fantasy VII dia hita ao amin'ny App Store
Mampiseho amintsika tranga iPhone 6s mahery kokoa ny horonan-tsary